အိပ်ချိန်လေးတော့ မှန်ပါစေ - Hello Sayarwon
ညဘက်တွေကို အလုပ်တွေ လုပ်ရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ စာဖတ်ရင်း၊ သီချင်းနားထောင်ရင်း ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကောင်းလို့ ထိုင်ကြည့်မိရင်း၊ ဂိမ်းတွေ ဆော့ရင်းက စောရင်စောတယ်၊ နောက်ကျရင်လည်း သန်းခေါင်မှ အိပ်တယ်ဆိုတဲ့သူလေးတွေရှိလား………
ဒါဆိုရင် သေချာတာ အိပ်ချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဘူးဆိုတာပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်လဲ…. ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောပြပေးပါရစေလား………
လူတော်တော်များများ လက်ခံထားတာက အိပ်ချိန်မှန်တာ၊ မမှန်တာက အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ပြည့်ဝလုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်ချိန်ရှိရင်ကို လုံလောက်ပြီ။ အိပ်ချိန်မ မမှန်တာက ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ဘူး။ အိပ်ရေးဝအောင် မအိပ်တာကသာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အရာရယ်လို့ပါ။
အိပ်ရေးပျက်တာ နည်းတူ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အိပ်ချိန် မမှန်ခြင်း
မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိခဲ့ရတာက အိပ်ရေးပျက်တာ တင်မဟုတ်ဘဲ အိပ်စက်ချိန် မမှန်တာကလည်း နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ် ဆိုတာပါ။
ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခု
ကျန်းမာနေစေဖို့ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားဖို့ လိုမယ်။ သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့လိုမယ်။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ဖို့လိုပါမယ်။ အိပ်ရေးဝမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာမှာပါ။ အသားအရေကစလို့ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းဖို့အထိ အရာရာအပေါ်မှာ အိပ်စက်မှုက သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ဆိုရင်လည်း ကောင်းမွန်လုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်မှုက မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါမယ်။
ဒီလိုနဲ့ အများစုလက်ခံလိုက်တဲ့အယူအဆက တစ်ညတာမှာ ၆ နာရီ ကနေ ၈ နာရီအတွင်း အိပ်စက်ပေးရင် ရောဂါကင်းပြီလို့ပေါ့။ ဒီ လက်ခံချက်တစ်ခုနဲ့ ညကို အလုပ်ပြီးချင်ဇောတွေနဲ့ အလုပ်များတဲ့အခါတွေဆိုရင် ညနက်အထိ အလုပ်လုပ်တယ်။ သိပ်အလုပ်မများတဲ့ အခါမျိုးဆိုရင် စောစောအိပ်တယ်။ အဓိက က လုံလောက်ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် ရှိဖို့ပဲလေလို့တွေးလိုက်ကြပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝလုပ်ငန်းစဉ်တွေ စည်းချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့က ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အိပ်ရာဝင်ချိန် ရှိဖို့ပါ လိုမှာပါ။ ဒီလိုပြောရတာက ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံးက နှလုံးကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
မြင်သာအောင် ပြောပြရရင် အိပ်ရာဝင်ချိန်ပြောင်းရင် မနက်ခင်း ထတဲ့အချိန်ပါပြောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းက ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို နောက်ထားလိုက်ဦး အရင်ဆုံးကတော့ မနက်စာ စားတာနောက်ကျမယ်။ ဒီလိုကနေ နေ့လယ်စာကိုပါနောက်ကျမယ်။ ညစာကို ညနက်မှ စားမယ် စတာလိုမျိုး ပြောင်းလဲမြင်တွေပါရှိလာမယ်။ ဒါက မြင်သာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုပါ။ အိပ်ချိန် မမှန်တာက ဒါ့ထက် ပြောင်းလဲမှု ပိုများပါတယ်။
တစ်ညလောက် အိပ်ချိန် နောက်ကျတာက ဘာမှမဖြစ်ပမယ့် တစ်ည တစ်ညဆိုပြီး ရက်ဆက်လာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေး အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုကကြီးလာမှာပါ။ လေ့လာမှုအရ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုက နှလုံးကျန်းမာစေဖို့၊ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်တာနဲ့ လေဖြတ်တာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် အစားအသောက် ဂရုစိုက်တာ နဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာအပြင် အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်တာ၊ အိပ်ချိန်မှန်မှန် အိပ်တာတွေလုပ်ဖို့လည်း လိုမယ်ဆိုတာပါ။
ညတိုင်းမှာ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပျော်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အိပ်ချိန်မမှန်တာက ရေရှည်မှာ နှလုံးကျန်းမာရေး အပါအဝင် ကျန်းမာရေးကို တော်တော်လေး ထိခိုက်စေနိုင်တယ် ဆိုတာပါ။ အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေဟာ အိပ်ချိန်မှန်တဲ့သူတွေထက် ကျန်းမာရေး ပိုထိခိုက်နိုင်တယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနိုင်ခြေကလည်း ပုံမှန်ထက် ပိုများပါတယ်။
၄ နှစ် ကျော်ကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူ ၁၁၁ ဦးကို လေ့လာခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအတွင်း သုတေသီတွေဟာ လေ့လာမှုမှာ ပါဝင်သူ တွေရဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်၊ အိပ်စက်ချိန် အတိုင်းအတာ၊ အိပ်ရာ ထချိန်တွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရတာက ညအိပ်ရာဝင်ချိန် မမှန်တာက တစ်ညနဲ့တစ်ညမှာ ၂ နာရီလောက် ကွခြားမှုရှိလာလေလေ နှလုံးရောဂါ ခံစားရ နိုင်ခြေက ပုံမှန်ထက် ၂ ဆပိုများလာလေလေပါ။
လေ့လာမှုအရသိလာရတာက ညဘက်မှာ အိပ်ချိန်မမှန်တာက နှလုံးရောဂါ ခံစားရနိုင်ခြေကို ပိုများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတွင်း အဆီများတာ၊ သွေးတိုးတာ နဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို ကင်းစေဖို့ဆိုရင် ညဘက်အိပ်ရာဝင်ချိန် လေးမှန်စေဖို့အတွက် သတိထားဖို့ လိုပါမယ်။
ကဲ…. Hello ဆရာဝန် ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်လိုလဲ….. နှလုံးရောဂါကင်းပြီး ကျန်းမာစေဖို့ ညဘက်တိုင်းမှာ အချိန်မှန်မှန် အိပ်မယ်ဟုတ်……….
Irregular sleep may increase risk of cardiovascular problems https://www.medicalnewstoday.com/articles/irregular-sleep-may-increase-risk-of-cardiovascular-problems Accessed Date 8 March 2020
Why Irregular Sleep Patterns May Affect Your Heart Health https://www.healthline.com/health-news/irregular-sleep-patterns-increase-risk-of-heart-attack Accessed Date 8 March 2020
Erratic Sleep Habits May Boost Risk of Heart Problems: Study https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=228634 Accessed Date 8 March 2020